Zaraim-potsiny ny diplaoma | NewsMada
Zaraim-potsiny ny diplaoma
Nivoaka iny ny valim-panadinana CEPE tamin’ny Cisco maro manerana ny Nosy. Tamin’ny ankapobeny, niakatra ny taham-pahafaham-panadinana. Efa nampoizin’ny maro izany hanaronana ny lesoka rehetra tamin’ity taona ity.
Nangina tokoa ny fitokonan’ny mpampianatra. Maty ny afo, nilamina ny fizotran’ny fanadinana sy ny roa herinandro nianaran’ny mpianatra nanenjehana ny telo volana tsy nianarana.
Nahalasa ny sain’ireo mpampianatra nitaky fanovana ny fizaram-potsiny ny diplaoma ho an’ireo kilonga. Tamin’ny taon-dasa, nianatra tsy tapaka ny zanaka malagasy, ambany ny taham-pahafaham-panadinana satria 56% izany ho an’ny CEPE.
Tamin’ity taona izy, zara raha nianatra dimy volana ny ankizy, niakatra ny taham-pahafaham-panadinana. “Tsy lojika”, hoy ireo mpampianatra. Atahorana ny hoavin’ireo ankizy ireo satria tsy ampy fahalalana izy ireo.
Etsy andaniny, faly ny ray aman-dreny satria afa-panadinana ny zanany. Tsy te hieritreritra izay lesoka tao ambadik’iny fanadinana tery vaimanta iny. Rehefa azon’ny zanany ny diplaoma dia izay ny zava-dehibe.
Nahazo tombony ny sekoly tsy miankina amin’ny fanjakana satria nahavita ny fandaharam-pianarana hatramin’ny farany. Ampy ny fahalalan’ny mpianatra. Lasibatra indrindra kosa ireo mpianatry ny EPP nanaraka ny onjan’ny zava-nitranga.
Tsy hijanona eo fa hitohy hatramin’ny fanadinana BEPC sy ny bakalorea ny fizarazarana ny diplaoma. Heverina fa tsy maintsy hasongadina amin’ny alalan’ny fampiakaran’ny taham-pahafaham-panadinana ity taom-pianarana tsizarizary ity. Izay ny hamafana ny volana maromaro tsy nianarana sy ny fitotongan’ny tontolon’ny fampianarana niseholany nanomboka tamin’ny aretina pesta niniana nampihorohoroana ny Malagasy sy ireo mpianatra tany an-tsekoly. Ankoatra izany ny tondradrano tsy azo nialana ary farany teo ny fitokonan’ny mpampianatra nanaovana letrezana ka maty momoka.
Any amin’ny fitondram-panjakana sy ny minisitera tompon’andraikitra ny vahaolana. Noterena ho nety ny fanaovana fanadinana ary tratrany ny tanjona. Hibaby ny vokany kosa ireo zanaka malagasy anetsiny lasibatra tamin’ity taom-pianarana ity.